Dowladda Federaalka oo is-bedel ku wadda maamulka degmada Marka kadib dagaalo halkaas ka dhacay – Radio Daljir
Luulyo 29, 2013 2:35 b 0
Marka, July 29, 2013 – Wasaarada arrimaha gudaha ee Jamhuuriyada federaalka ah ee Soomaaliya, ?ayaa wadda qorshe ay ku bedelayso saraakiil ka tirsan kuwa maamulka ee gobolka shabeelaha Hoose, kadib shaqaaqo dhowaan halkaasi ka dhacday.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Cabdikariin xuseen Guuleed oo hortegey Baarlamanka shalayto, wuxuu sheegay in ay is bedel buuxa ku samayn doonaan maamulka ciidanka iyo kan caadiga ah ee gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan deegaanka Marka.
Baarlamanka Soomaaliya ayaa wasiirka su?aalo ka weydiiyey arimo la xiriira amaanka iyo dagaalada ka dhacay qeybo ka mid ah dalka, wuxuu sheegay wasiirku in xaalada Marka ay soo arkeen isla markaasna ay soo qaboojiyeen.
Saraakiisha ku sugan shabeelaha hoose ee ay bedelayso wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga, ayaa la sheegay in ay dhamaantood yihiin kuwa looga shakiyey in ku lug lahaayeen dagaaladii beelaha ee ka dhacay gobolkaasi toddobaadkii hore.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxay haatan baaris ku waddaa dagaal khasaare dhaliyey oo ka dhacay Mareerey, kaasi oo u dhexeeyey ciidamada Dowladda federaalka ah iyo kuwa Maddani ah oo deegaanka joogay, waxaana halkaas ku dhintay labba ka tirsan askarta deegaanka.